बाबुराम दाईको “नयाँ शक्तिको” अष्ट्रेलियामा गठन भयो – क्यानाडा र आमेरिकामा पनि हुदै । | Canadian Reporters
बाबुराम दाईको “नयाँ शक्तिको” अष्ट्रेलियामा गठन भयो – क्यानाडा र आमेरिकामा पनि हुदै ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तावित नयाँ शक्तिको अष्ट्रेलियामा भेला आयोजक कमिटी निर्माण भएको छ । आइतबार सिड्नीको कोग्रामा आयोजना गरिएको एक प्रारम्भिक भेलाले यस्तो कमिटी बनाएको हो । कमिटीको संयोजकमा विनोद पौडेल चुनिएका छन् । यस्तै अन्य सदस्यहरुमा अरुण तामांग, अस्मित आचार्य, सुरज श्रेष्ठ, दिनेश जिसी, सुनान चौलागाई, अनिल पाण्डे, सुमन खरेल, बाबु गोर्खाली, दिपु न्यौपाने, तिर्थराज कार्की, विकास श्रेष्ठ, सविता भट्टराई रहेका छन् ।
अष्ट्रेलियाम रहेर विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न हुनुभएका नेपालीहरु भेलामा सहभागी थिए । यसअघि नेपालमा डा. बाबुरा भट्टराईसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेर थालिएको कार्यक्रममा बोल्दै डा. भट्टराईले पारदर्शिता, राजनीतिक ईमान्दारिताका साथ देशलाई सम्बृद्धिमा लैजानका निम्ति नयाँ शक्तिको प्रार्दूभाव भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नयाँ शक्ति अभियान निर्माणमा करिब तीन लाख सदस्यहरु संस्थापक बन्ने भन्दै यसका लागि देश विदेशमा अहिले अभियान चलिरहेको बताउनुभयो । देशका निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ रहेका सबैजना एकै ठाउँमा आउने हो भने यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुनेछ जसले देशलाई प्रगति र विकासको चरणमा लैजानेछ, उहाँको भनाई थियो ।
भेलाा उपस्थितहरुले डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीको आर्थिक श्रोत, पारदर्शीता, संगठन संरचना, जनजाति, दलित, आदिवासी र अन्य समूदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण आदिका विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा भट्टराईले सैद्धान्तिक स्वरुप तयार भइसकेको र अब विकासको खाकाहरु कोर्नका निम्ति विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा आफुले गरेको बताउनुभयो ।
हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार क्यानाडा र आमेरिकामा पनि ऊक्त नया शक्ति को गठन को तैयारी भैरहेको छ।
नेपाली काँग्रेसको निर्वाचित केन्द्रीय समिति (सूचीसहित)
CSI Conducted Second Level Training Program in Nepal
ओली जी नतर्सिनुस्, हामीलाई सरकारको हतारो छैन’ : सभापति देउवा
अमेरिकाको DC मा नाकाबन्द पछधर र बिपछी को छुट्टाछुट्टै रेली – नेपाली विभाजित
नेपालमा गाँजाको आयुर्वेदिक विकल्प: समाचारका नाममा अतिरन्जित विश्लेषण किन?